Nhau - Ko simba rinovandudzwa richatsanangurazve tekinoroji mune ramangwana rakagadzikana?
Mukutanga kwema1900, nyanzvi dzesimba dzakatanga kugadzira gidhi remagetsi.Vakawana magetsi akawanda uye akavimbika kuburikidza nekupisa zvisaririra zvakaita semarasha neoiri.Thomas Edison akashora manyuko aya esimba, achiti nzanga inowana simba kubva muzvinhu zvakasikwa, zvakadai sechiedza chezuva nemhepo.
Nhasi, mafuta ezvicherwa ndiwo ane simba gurusa pasi rose.Sezvo vatengi vakawanda uye vachiwedzera kuziva nezve kushata kwemamiriro ekunze, vanhu vari kutanga kutora simba rinogoneka.Shanduko yepasi rose kuenda kumagetsi akachena yakanganisa kufambira mberi kwehunyanzvi hweindasitiri uye yakasimudzira magetsi matsva, zvishandiso uye masisitimu.
Photovoltaic uye kumwe kuvandudzwa kwezuva
Sezvo kudiwa kwesimba rinodzokororwa kunowedzera, vashandi vemagetsi vanogadzira matekinoroji matsva uye kuwedzera kugovera.Simba rezuva ndiro chigadzirwa chikuru chepasi rose mumunda wesimba rakachena.Mainjiniya ezvakatipoteredza vakagadzira mapaneru ephotovoltaic (PV) kuti avandudze kushanda kwesimba rakachena.
Iyi tekinoroji inoshandisa masero ephotovoltaic kusunungura maerekitironi mupaneru, nekudaro ichigadzira simba razvino.Mutsara wekufambisa unounganidza tambo yemagetsi uye inoshandura kuva simba remagetsi.Photovoltaic zvishandiso zvakatetepa kwazvo, izvo zvinobatsira vanhu kuzviisa pamatenga uye dzimwe nzvimbo dziri nyore.
Chikwata chemainjiniya ezvemamiriro ekunze nemasainzi vakatora tekinoroji yephotovoltaic uye vakaivandudza, vachigadzira vhezheni inoenderana negungwa.Nyanzvi dzesimba dzeSingapore dzakashandisa mapaneru anoyangarara ephotovoltaic kugadzira purazi rakakura kwazvo rinoyangarara rezuva.Iko kudiwa kukuru kwesimba rakachena uye nzvimbo shoma yekugadzira yakanganisa kufambira mberi kwetekinoroji uye yakashandura chikamu chesimba rinogoneka.
Imwe budiriro yetekinoroji yakakanganiswa nesimba rinodzokororwa inzvimbo dzekuchaja solar dzemotokari dzemagetsi (EV).Aya magetsi emagetsi anosanganisira photovoltaic canopy iyo inogona kugadzira magetsi akachena panzvimbo uye kuidyisa zvakananga mumotokari.Nyanzvi dzinoronga kuisa midziyo iyi muzvitoro zvegirosari nenzvimbo dzekutenga kuti vawedzere kuwana kwevatyairi vemotokari yemagetsi kuwana simba rinogoneka.
Inoenderana uye inoshanda sisitimu
Iyo renewable energy sector iri kukanganisawo kufambira mberi kwehunyanzvi hwehunyanzvi.Zvishandiso zvakangwara uye masisitimu zvinochengetedza simba uye kuderedza kudzvanywa pamagetsi emagetsi akachena.Kana vanhu vabatanidza matekinoroji aya, vanogona kuderedza kuburitswa kwegasi regreenhouse uye kuchengetedza mari.
Chishandiso chitsva chakangwara chinotora nzvimbo yekugara ndeye autonomous thermostat.Eco-conscious varidzi vedzimba vari kuisa tekinoroji yekuvandudza kugadzikana uye hupenyu hurefu hwepadenga resolar panels uye mamwe ari-saiti akachena simba tekinoroji.Smart thermostats inoshandisa iyo Internet yezvinhu (IoT) kuwedzera mukana weWi-Fi yemabasa epamberi.
Midziyo iyi inogona kuverenga mamiriro ekunze enzvimbo uye kugadzirisa tembiricha yemukati kuti ideredze kurasikirwa kwesimba pamazuva akanaka.Ivo zvakare vanoshandisa mafambiro ekuona ma sensors kugovera chivakwa munzvimbo dzakawanda.Kana nzvimbo isina munhu, sisitimu inodzima simba rekuchengetedza simba.
Cloud-based smart tekinoroji inotsigirawo kuvandudzwa kwesimba.Vagari uye varidzi vebhizinesi vanogona kushandisa iyo sisitimu kuvandudza kuchengetedzwa kwedata uye kuvandudza kureruka kwekuchengetedza ruzivo.Cloud tekinoroji inovandudzawo kugona kwekuchengetedza data, kubatsira vanhu kuchengetedza mari nesimba.
Renewable simba rekuchengetedza
Hydrogen mafuta ekuchengetedza maseru ndiyo imwe budiriro yetekinoroji yakakanganiswa neiyo renewable energy sector.Imwe yezvipimo zveakachena magetsi masisitimu akadai solar panels uye mhepo turbines ndeyekuti ivo vane yakaderera kuchengetedza kugona.Midziyo miviri iyi inogona kupa simba rinogoneka pamazuva ezuva uye kune mhepo, asi zvakaoma kuzadzisa zvinodiwa nemagetsi evatengi kana mamiriro ekunze achinja.
Hydrogen fuel cell tekinoroji yakavandudza kuchengetedza kwesimba rinodzokororwa uye kugadzira simba rakawanda.Iyi tekinoroji inobatanidza solar panel uye wind turbines kune yakakura-chiyero bhatiri michina.Kana iyo renewable system yachaja bhatiri, magetsi anopfuura nepakati pe electrolyzer, achikamura zvinobuda muhydrogen uye oksijeni.
Iyo yekuchengetedza sisitimu ine hydrogen, ichigadzira hupfumi hunogona kupa simba rekupa.Kana kudiwa kwemagetsi kuchiwedzera, hydrogen inopfuura nemushanduri kuti ipe magetsi anoshandisika kudzimba, mota dzemagetsi uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi.
Tekinoroji inoenderera mberi
Sezvo munda wesimba rinovandudzwa richiramba richiwedzera, rinotsigira uye rinoenderana
matekinoroji achapinda mumusika.Chikwata chemainjiniya chiri kugadzira motokari yemagetsi inozvityaira ine denga rine photovoltaic-lined.Motokari inomhanya pasimba rezuva rainoburitsa.
Vamwe vanogadzira vari kugadzira mamicrogrid akachena anoshandisa simba rinodzokororwa chete.Nyika nenzvimbo diki dzinogona kushandisa tekinoroji iyi kuwana tarisiro yekudzikisa emission uye kugadzirisa kudzivirira kwemuchadenga.Nyika dzinotora tekinoroji dzesimba dzakachena dzinogona kuderedza kabhoni tsoka uye kuwedzera kukwanisa kwemagetsi.
Solar Street Light Pole, Solar Powered Tochi, Waterproof Solar Mwenje, Swimming Pool Solar Mwenje, Solar Light Bulb, Solar Led Mafashama Mwenje,